Gungwa Bled: Kushanyira fairytale Slovenia | Absolut Kufamba
Gungwa Bled: Kushanyira fairytale Slovenia
Mune imwe nzvimbo muSlovenia yakavharirwa pakati Julian Alps imwe yeiyo madhamu akanaka kwazvo pasi. Imwe yenzvimbo idzo dzinomutsa mashiripiti engano uye Disney mafirimu nekuda kwebhuruu remvura yaro, nharaunda yaro ine makomo uye runako rweimwe chitsuwa chidiki. Welcome to gungwa rakadeura ropa.
1 Nhanganyaya kuLake Bled
2 Kushanyira Gungwa Bled
3 Chii chekuona nekuita muBled
Nhanganyaya kuLake Bled
Ngano dzinoti munzvimbo ine Lake Bled nhasi paive neMadonna chapel iyo yakasiiwa nevanhu veko. Pakangocheneswa nzvimbo iyi, chimiro chayo chakatanga kutsemuka uye mbudzi dzakauya dzichienda sezvavanoda. Aya ndiwo marangero aiita vanamwari nzvimbo yekushinga nekuputira mvura mutembere iyi kuti nekufamba kwenguva kwaizozivikanwa se Chechi yeKukwidzwa kwaMaria.
Chiyeuchidzo chechiratidzo chine bhero hombe zvakare inotakura ngano yekufa kwemuridzi weimba iri padyo nechitsuwa. Kuti unzwe kunzwa kuperekedzwa neMhandara Maria panguva iyoyo yerima, chirikadzi yakaraira bhero kuchechi iri pachitsuwa cheBled, nerombo rakaipa zvekuti rakanyura pamwe neigwa rakaitakura pazuva remhepo. Kunyangwe hazvo akazoraira bhero idzva kubva kuna Papa pachake muRome, vagari vemo vanovimbisa izvozvo bhero ranyura richiri kurira kubva pakadzika pegungwa.
Yakasimudzwa neye yakasarudzika ngano, Lake Bled yakaita senge enigmatic nzvimbo seyayo yapfuura. Iyo chete yakasarudzika nyanza muSlovenia zevezeve pakati penhongonya dzeJulian Alps kuenda Mamita zviuru zvishanu pamusoro pegungwa kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSlovenia, kusiri kure nemuganhu weAustria.
Na upamhi kusvika pamamita 1380 uye kudzika kwemamita 30,6, Lake Bled inogona nzvimbo inonyanya kuzivikanwa muSlovenia yese uye imwe yeaya akajairika marongero eEuropean ane mashiripiti ezvinyorwa zvekare zvehama Grimm. Kubva pane fungidziro iyo inopa iyo yakanaka marongero ekuzorora uye kuongorora mune zvemuno ngano.
Kona uko zvakakodzera kushandisa zvinopfuura zuva uchishandisa iyo bled musha, yakatarisana nedziva, sehwaro hwakakwana kushanyira nharaunda, kudzidzira mitambo yemvura kana kuzorora mune imwe yenzvimbo dzekugara dzakanaka munzvimbo ino.
Kushanyira Gungwa Bled
Kana iwe ukaenda padyo neLake Bled, unogona kusangana ne igwa rematanda rinowanzoitwa bletna. Rutsigiro rwakakwana rwunobva kumahombekombe ndokunanga kuchitsuwa ichi chinonakidza uko kereke inomira pane chidimbu chemasango emashiripiti.
Paunosvika pachitsuwa ichi, iwe unozokwanisa kutarisa kuvapo kwe 99 nhanho kutungamira kuchechi. Kufamba kwengano kunokoka iwe kuti ushanyire iyi shongwe yakarukwa neyekare-Romanesque, Gothic uye Baroque masitaira, ane mukurumbira pakati pemichato yakawanda yevagari ve rombo rinounza. Icho chikonzero hachisi chimwe kunze kwekuvapo kweiyo inozivikanwa se "Bell of Wishes", iyo inounza rombo rakanaka kana iwe ukafunga nezve chako chishuwo usati waita chita.
Mushure mekufamba kwemashiripiti, chitsuwa cheBled chinosanganisira kubva kuchitoro chekuyeuchidza uye zvakajairika hunyanzvi kuenda kune jetty kunobva zviitiko zvakasiyana. Zvimwe kayaking, kudhizaivha, kubata hove kana kukwasvaPakati pedzimwe sarudzo zhinji, Lake Bled ndiyo inzvimbo yakakwana yekumwisa muviri wako uye kuusimbisa pamwe nemangwanani pamahombekombe ayo ekupisa kwezuva.
Asi dzikama, nekuti muLake Bled mune zvakawanda, zvakawanda. Pamusoro pechitsuwa chayo chinozivikanwa, unogona zvakare kushanyira iyo medieval castle yakatarisana neimwe yemahombekombe edziva kubva pamamita zana nemakumi matatu pakakwirira panosangana makwikwi akasiyana emiseve mumwedzi yezhizha. Kuvaka uku kwakavakwa kekutanga muzana ramakore regumi nerimwe, kunyangwe hazvo kuwedzera kukuru kwakaitika pakati pezana regumi nenatanhatu negumi nemanomwe, zvichipa maberere nemitambo yakanaka yekudzokera kuMiddle Ages.
Uye ndeyekuti iyo Bled nzvimbo inounza pamwechete irresisible indasitiri yezviitiko mukati megore. Huya paKisimusi uye iwe uchaona avo vakasiyana vachienda nekukweva bhero rekare rakanyura reshirikadzi yegungwa. Kana kuti zvikasadaro, donhedza pasvondo yekupedzisira yaChikunguru uye enda kune imwe yemhemberero dzakanaka kwazvo kwete muSlovenia chete, asi pamwe muEurope yese: mutambo «Bled Mazuva uye Bled Husiku». Musangano umo vazhinji veko vanokanda mumvura panguva dzemadekwana makenduru akasiyana anogadzirwa mukati memazai emazai. Yakazara kusvika Makenduru zviuru gumi zvinovheneka dziva rese panguva yehusiku ichipa chiitiko chisingakanganwiki icho, neimwe nzira, chinoyeuchidza chiitiko ichocho chengano kubva muDisney bhaisikopo Tangled.
Chii chekuona nekuita muBled
Nyanza Bled inongova muromo wepakati pechando senzvimbo ine Bled, yakanaka kubatanidza kubva kuguta guru reSlovenia, Ljubljana, kunakidzwa nekuvapo kwemasango makuru, makomo anoita seanopuruzira uye nerunyararo rusingaperi.
Sarudza pekugara munzvimbo iyi uye unakirwe nemafuro uye zvakavanzika zveiyo Triglav National Park, yakanakira nzira dzakasiyana dzekukwira. Kana kurasikirwa ne vintgar gorge, kuwedzerwa kwemakiromita 1.6 anoyambuka makomo eHom neBorst padyo nerwizi Radovna, yakanaka kutevedzera nzira yayo kusvika yasvika pazambuko rinomira pamusoro peSum Waterfall, inosvika pamamita gumi nematatu pakureba.
Chiitiko chechisikigo kupedzisa mune tavern pakati pemiti kwavanokushandira iwe a Kremna Rezin, mhando yekeke rakajairika rinoumbwa neinoshamisira puff pastry sangweji izere nekirimu.
Chikafu chinotapira chakanakisa chekupedzisa mazuva mashoma ekuzorora mune iyi Wonderland uko Lake Bled yakasimbiswa seimwe yenzvimbo dzakanakisa muSlovenia.
Kufanana neiyo yakakwana ngano kurongedza kuti utarise mukati uchitsvaga kunyarara uye mashiripiti.
Ungade here kushanyira Lake Bled?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Gungwa Bled: Kushanyira fairytale Slovenia
Inishuwarenzi yekufamba semhuri, iyo nyaradzo yezororo rako